NAMOOTA ADDUNYAA KANAA IRRATTI MILKAA’INA GUDDA IRRA GAHAN!-TAMASGEEN AXINAAFUU – Beekan Guluma Erena
NAMOOTA ADDUNYAA KANAA IRRATTI MILKAA’INA GUDDA IRRA GAHAN!-TAMASGEEN AXINAAFUU	Beekan Erena
Education June 28, 2016June 28, 2016OROMO
199SHARESKana TamsaasiKana Tamsaasi
NAMOOTA ADDUNYAA KANAA IRRATTI MILKAA’INA GUDDA IRRA GAHAN!
1)KARAA BIZINEESII (DALDALAA)
BILL GATES (1955 _AMMAA)
Nama kaampanii Mayikirosoft argatedhaa. Bara 1995 hamma 2007’tti sooressa addunyaa kanaa ture. Qabeenyaan isaa bara 2012 tti doolaara billiyoona 76.6 akka ta’etti tilmaamamaa. Amma ammaa garuu xiyyefanoon isaa dhaabbata gargaarsaa “ Gates Foundation” jedhu irra ta’ee jiraa.
LAARRY PAGE(1973_) ykn SERGRY BRIN (1973_)
Google warra waliin argateedha. Addunyaa daldalaa keessatti ammo google’n shora olanaa taphatee jiraa. Har’aa namnii internet keessaa waan tokko barbaaduu harki caalu karaa google seenuuni.
STEEVE JOBS (1955_2012)
Kalaqa koompuuteera Apple jedhamu keessaa shora ol’aanaa qaba. Apple irra darbuun omishaalee apple ta’aan akka ipod,ipad fi imac jedhaman kalaquun kaampanii Apple sadarkaa milkaa’inaa gudda irra akka gahu godhee jira.
RICHARD BIRANSON (1950_)
Hojii uumaa biyyaa Biriitenii. Dhaabbata “Virgin” jedhamu nama argatedha.Namni kun duukanaa( suuqii ) xiqqoo irra ka’uun bizinesii isaa gara dhaabbata milkaa’uun hamma industirii garaagaraa akka baaburaa, xiyyaaraa , fi dhaabilee Faayinaansii garaagaraatti guddachuu danda’eera.
WALT DISNEY (1901_1966)
Lammii biyya Ameerikaa ennaa ta’uu pirodiwusara(producer) fiilmiiti. Disney’n yeroo jalqabaaf nama taatee kartooni (taatee akka ashaangulitii) akka “mickey Mouse” kan argate fi bakkee bashananaa “Disney theme parks” jedhamu kan orlandotti argamu namahundeessedha.
HENRY FORD (1863_1947)
Lammii biyya Amerikaatii. Warraqsaa Auto kessatti gahee inni taphate yaraa mitii. Konkolaataa ford baay’inaan gatii gadiaanaan omishuun dhaabata Motoraa Ford akka biyyota garaa garaa keessatti milkaa’ina argatu nama godheedha.
2) KARAA BARREFAMAA!
Barresituu kitaaba “haariipoterii” yeroo ta’u kitaabni kun Kitilli 400 ol amma ammaatti gurguramuun Kitaabaa baay’inaan gurgurame jedhamuun addunyaa kenyaa irratti beekamtii kan argatedha. Yeroo Harry Potteri barresuu eegaltuu nama gargaarsaan jiraatu haa taatu malee amma Milliyenera qarshii qulqulluu doolaara miliyoona 798 ta’u qabdudha.
Barresaa biyyaa Biritish kitaabolee akka “ The lord of the rings, The hobbit , fi The silmarillion” jedhaman nama barresedhaa. Kitaabni isaa “lord of the rings” jedhu yeroo hedduu kitaaba baay’ee jaallatamaa jarra 20ffaa gosaa barrefamaa Fantcy(barrefama akka abjuu) jedhamuun filamuu danda’eera.
STEPHEN KING (1947_)
Barresaa biyya Amerikaa kitaabaa miliyoona 350 ol gurguramuu danda’ee barreseedha. Barrefamootnii isaa gosa “Horror” (waa’ee waan nama sodachisuu nama barresuu) dha.
JOHN LENNON (1940_1980)
Lammi biyya Biritish gasa muziqaa “pop” jedhamuun sadarkaa olaanaa nama qabateefi garee Musiqaa “Beatles” jedhamuun kessatti beekamtii guddaa nama qabudhaa. Gareen kun seenaa keessatti gaaree Musiqaa “pop” kan gitnii hin argamneef jedhamuun beekamaa. Utuu hin ajjefamin duras hojii dhuunfaa isaa itti milkaa’ee akka qabu nii dubbatamaa.
Wallee musiqaa pop lammii biyya Amerikaa ta’edha. Albemiin muziqaa isaa “Thriller” jedhamuu kan bara 1982 gabaa irra oolee seenaa keessatti baay’ee kan gurguramedha. Bara 1980’ta keessa addunyaa muziqaa pop irratti mootii ta’uun Vidiyoo muziqaa mira namootaa hawwatan hojjeteera. Kaasetti Miliyoona 400 ol akka addunyaatti riikordii nama galmeesse yeroo ta’uu toora internetaa irraa Artistii muziqaan isaa kan enyuun ol gadi bufame (downloaded) dha.
Lammi biyya Ameerikaa Muziqaa Pop wallisuun beekamu, Taatee Filmii fi mirga namoomaaf falmuun nama beekamtudha. Seenaa keessatti Artistii dubaraa kaasetta Miliyoona 300 ol gurgurachuun rikordii seenaa keessatti qabaachuu nama dandeessedha.
4) ARTII FILMII
Alferd Hitchcon (1899_1980)
Pirodusera fiilmii lammumaa Ingiliziif Ameerikaa qabudha. Filmii 50 ol milkaa’inaan nama Pirodiwus godhe yeroo ta’uu ittiwaamama Oskarii al 16 fi badhaasa 5 nama argachuu danda’edha. Daarektera Fiilmii guddicha jarraa 20ffa jedhamuun nama waamamudha.
GERGE LUCAS (1944_)
Daarektera filmii milkaa’ina gonfachuu danda’eedha. Bara 2013 doolaara Ameerikaa biliyoona 4.2 of harkaa nama qabudha.
Taphataa kubbaa miillaa lammii Biraazil kan taphataa beekamaa jarraa 20ffa jedhamuun beekamaa. Biraaziliif taphaa waancaa Addunyaa argamsiisee sadii garee isaa waliin ta’uun mo’eera.
Lammii Ameerikaa bishaan daakuun Medaaliyaa Warqee 18 kan gama Ispoortii kanaan argamee hin beekne nama argateefi waliigalaan Medaaliyaa 22 argatee jira.
Atileetii biyya Jamaayikaatii. Rekordii figicha 100m fi 200m qaba. Medaaliyaa warqee figicha 100m,200m fi figicha ulee wal harkaa fuudhuu 100m bara 2008 fi 2012 mo’achuu nama danda’eedha.
Taphataa kubbaa miillaa lammii Arjentiinaati. Yeroo jalqabaaf badhaasa FIFA’n qophaa’uun taphataa waggaa kanaa jedhamuun badhaasnii itti argamu fudhachuu nama danda’edha.
ROGER FEDER (1981_)
Taphataa teeniisii lammii biyya Swiss ta’edha. Al 17 dorgommii teeniisi keessatti mo’icha sadarkaa olaanaa ta’ee kan “grand slam titles” jedhu nama mo’ateefi torban 302 akka addunyaatti tokkofaa ta’uun nama seenaa galmeessedha.
Lammii Ameerikaa taphataa kubbaa kaachoo yeroo hundaa jedhamuun seenaan isa yaadatudha.
Geegesaa dhaabbata tokkumaa Afirikaa(ANC) fi mormaa sirnaa Apaartaayidi ennaa ta’uu dhalataa Afirikaa kibaatii. Waggaa 20 ol hidhaan erga dabarsee booda geggesaa Afirikaa kibbaa yeroo jalqabaaf karaa diimookiratawaa ta’een filatamuu danda’edha.
Geggesaa sochii tokkumaa Poland nama ta’edha. Motummaa sirna koomunizimii yeroo sanii kuffisuun pirezidaantii biyyatti ta’ee baraa 1990 _ 1995 tti geggesuuf nama gahedha.
POPE FRANCIS (1936_)
Phaaphaasi yeroo jalqabaaf Ameerikaa irra filatamaniidha. Amantaa Kaatolikiif kallatii haaraa ta’e milkaa’inaan uumuu danda’anii jiru.
ALBERT EINSTEIN (1979_1955)
Sayintiistii lammi biyya Jaarmaanii yeroo jalqabaaf Tiyoorii Relativety argatedha. Tiyoorii kuantamiifille bu’aa laayyoo hin taane eda’eera.
TIM BERNERS LEE(1955_)
Lammii biyyaa Ingilizii saaphana addunyaa wal qunnamsiisu (World wide web) nama yeroo jalqabaaf kalaqedha. Kalaqaa isaa kana tolaan waan kenneef bu’aa maallaqaa irraa haa dhabu malee bu’aan hojii isaa akka addunyaata baay’ee baratamuu danda’eera.
ANA TAMASGEEN AXINAAFUU YEROON TA’UU ASUMA BIYYA DHALOOTA QUBEE KAN TAATEE OROMIYAA MAGAALAA SHAAMBOO IRRATII!
YAADA KEESSANIIF BAKKA GUDDAN KENNA!
PHONE: +2519 490 980 88
Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa199SHARESKana TamsaasiKana Tamsaasi
← MAQOOTA JAALAALAAF KENNAMAN?!-Keenyamoo keenya mitii? -Lalisaa Indiris Adam (Nuuressaa) Dhidhiibba@gmail.com
BEKELE GERBA ,GURMESA AYANO,DEJENE TAFA AND ADISU BULALA’ Issues. Warri Afaan kana dandeessan waan baay’ee irraa barattu. Obsaan dubbisaa xumuraa maaloo!! →